Archive du 20200619
Rodoben’ny mpanohitra Miantso ny mpitondra mba hametra-pialana
Mangataka ny hialan’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny ekipany faran’izay haingana ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM.
Gerard Ramamimampionona Miantso ny mpitondra hanatona ny mpanohitra \_
Be dia be ny olana eto amin’ny firenena toy ny resaka fampianarana, ny rova, ny tsy fanjarian-tsakafo, ny tsy fandriampahalemana, hoy ny filoha lefitry ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy,
Raharaha 8,3 miliara ariary Hoesorina koa ve ny Minisitra Lalatiana ?
Afera iray vaky indray io ny raharaha tsenan’asam-panjakana N°059-PRM/SG/PRMP/UGPM-2019, mahakasika asa fanavaozana sy fametrahana “muséographie” ao amin’ny Lapan’i Manjakamiadana.
Fanatsikafonana an-gazety Olana ny fakàna loharanom-baovao
Nanome fankasitrahana ireo fanatsikafonana an-gazety mendrika ny Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM) omaly.
Ho sitrana tokoa anie !
Tsy ny aretina toy ny tazo mahery, ny dengue, ny COVID 19 sy ny aretim-batana rehetra ihany ankehitriny no mahazo sy hatrehin’ny Malagasy.
Tetikasa PIAA Mitohy ny famatsiana fitaovam-piasana ho an'ireo mpisehatra
Fiara tsy mataho-dalana miisa 07 no natolotry ny firenena frantsay sy ny Vondrona Eropeanina ho fanohanana ny tetikasa PIAA omaly.
Pr Ralison Roger “Omeo sehatra ny famokarana sy fanodinana anatiny”
Misy fiantraikany amin’ny toekaren’ny firenena iray ny tsy fahampian’ny orinasa manodina ny vokatra eto an-toerana.
Fepetra hitsinjovana ny orinasa Mila fanaraha-maso ny fanatanterahana azy
Tsy dia vahaolana maharitra ny fanemorana ny fandoavan-ketra indrindra fa ho an’ny orinasa madinika sy salantsalany.
Kamio norarafan’ny dahalo tifitra Olona roa indray namoy ny ainy
Olona roa no namoy ny ainy dia Randrianatoandro Roger Berthin antsoin’ny olona hoe José sy ny namany mpiara-miasa aminy noho ny fanafihana mitam-basy nitranga omaly maraina tao Fandana, Bepeha,
Ankorondrano Tratry ny vela-pandrika ilay mpivarotra rongony
Ramatoa iray 40 taona, no voasambotry ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina eny Anosy tao an-tokantranony afak’omaly 17 jona teny Antsalovana Antohomadinika.
Randrianaivo Eric “Fandresena ho an’ny Malagasy no azo teny Ambohitrimanjaka”
Tsy ho an’ny mponin’Ambohitrimanjaka irery fa ho an’ny vahoaka Malagasy rehetra mihitsy hoy Randrianaivo Eric, mpitondra tenin’ireo mponina eny
Fitsarana Hisy fandaminana vaovao ato ho ato
Mbola mitoetra aloha ny fepetra rehetra mahakasika ny fandraisana ny raharaha rehetra eny anivon` ny fitsarana.
Fanavaozana ny ao an-tokantrano Raikitra ny fihenam-bidy
Rehefa volana jona toy izao dia maro ny tokantrano malagasy no te hanavao sy hanatsara ny ao an- tokantrano ao. Anisan' ireo orinasa manana tolotra mifanojo amin' izany indrindra ny tranombarotra « Baolai ».
Hopitaly manara-penitra Vehivavy iray matin’ny Coronavirus
Vehivavy iray 61 taona notsaboina teny amin'ny hopitaly manara-penitra Andohatapenaka no namoy ny ainy vokatry Coronavirus, ka nampiakatra 13 izany hatreto no lavon'ity valanaretina ity teto Madagasikara.
Ady amin’ny coronavirus Miankina olona tsirairay ny maha mety na tsia azy
Hafa raha samy firenena isika eto Madagasikara amin’ny fifehezana ny valanaretina mitaha ny firenen-kafa.